IVilla Zacchi-iFlathi enkulu - I-Airbnb
IVilla Zacchi-iFlathi enkulu
Ikhaya lam ukwakweli Parma Apennines, kwindawo ezolileyo indawo emnandi, ilungele lweholide ozinikezele ukuba nandi nokuphumla kunye ukutyelela iinqaba eliqela ezinika kwimbali nenkcubeko-zokupheka le ndawo, nayo endhawini kukho kwiindlela ezininzi kubahambi kunye nabathandi bendalo.
Indlu enemigangatho emi-3 ejikelezwe buhlaza, yahlulwe yangamagumbi amabini, kwiTuscan-Emilian Apennines, ekwindawo entle kakhulu yokutyelela iinqaba kunye neemyuziyam zendalo, ukuhambahamba kwiphondo laseParma nasePiacenza.
Esi sibhengezo sibhekisa kwiflethi enkulu, ngolu hlobo lulandelayo:
Kumgangatho wokuqala kwaye yokugcina impahla ekungeneni ezizimeleyo, eziquka: Kitchen (zixhotyiswe Isitovu, ifriji, isikhenkcezisi, eziko), 3 okulala, 1 eyodwa lokulala, izindlu zangasese-2, 1 egumbini kunye nembono ephangaleleyo, 2 masimu kunye nemibono jikelele;
- Ukubanakho ukubhukisha indlu yonke;
I-Wi-Fi yasimahla, indawo yokupaka, igadi, indawo yebarbecue yangaphandle;
Izilwanyana zasekhaya ezivumelekileyo;
Naziphi na iindleko zokufudumeza azibandakanyi kwixabiso lemihla ngemihla kwaye zibalwe ekupheleni kokuhlala ngokusekelwe kusetyenziso olwenziweyo.
4.54 out of 5 stars from 16 reviews
4.54 · Izimvo eziyi-16
Yindawo ezolileyo enemibono egqwesileyo ye-panoramic, ehlotyeni unokonwabela imozulu eqhelekileyo yee-Apennines, oko kukuthi iintsuku ezinelanga kodwa ezipholileyo.
Ndiyafumaneka ukuze ndiphendule imibuzo yeendwendwe malunga nokuhlala kwazo.